ADIES' CODE အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သော Sojeong သည် အဆိုတော်နံပါတ် ၁၁ အဖြစ် စင်ပေါ်တက်ခဲ့ပြီး 'ကျွန်မက အခုဆိုရင်တော့ ပြုံးရယ်ချင်သော အဆိုတော်ပါ' လို့ သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။LADIES' CODE အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦး ပါ၀င်သော girl groupအဖွဲ့၏ code အဖွဲ့အနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပွဲဦးထွက်ခဲ့သည့် girl groupများထဲတွင
K-POP | Khaing 기자 | 2020-12-01 23:45
ENHYPEN သည် Big Hit Entertainment နှင့် CJ ENM၊ Billip Lab နံပါတ် ၁ အဖြစ် Jeongwon၊ Hee-seung၊ Jay၊ Seong-hoon၊ Sunwoo၊ Nikki တို့ပါဝင်ပြီး Mnet ၏ survival အစီအစဉ် 'I-LAND' မှ ရွေးချယ်ခံရသူ ၇ ဦးက ပွဲဦးထွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ်သည် 'BORDER: DAY ONE' သီချင်းခေါင်းစဉ်ဖြစ်သော မတူညီသော
K-POP | Khaing 기자 | 2020-11-30 22:13
Kai ၏ ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော “KAI (开)” ကို နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် ညနေ ၆ နာရီတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီတွင် YouTube ၌ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအားဖြင့် EXO Kai ၏ ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော KAI ကိုထုတ်လွှင့်ရန် အွန်လိုင်းမီဒီယာကွန်ဖရင့်တစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပြီးသူ၏ တစ်ကိုယ်တော် ပွဲထ
K-POP | MoMo 기자 | 2020-11-30 22:11
Pursean အဖွဲ့သည် Park Ma-Seong (အဆိုတော်)၊ Choi Hong (ဂစ်တာ)၊ Kim Beom-soo (ဘေ့စ်) နှင့် Kim Min-jae (ဒရမ်) ပါဝင်ပြီး မကြာသေးမီက တရားဝင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်က တက္ကသိုလ် ဂီတပွဲတော် Grand Prize ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီး အမျိုးမျိုးသောဂီတလှုပ်ရှားမှုများစတင်ခဲ့သည်။၂၅ ရက်နေ့တွင် အေဂျင်စီ
K-POP | Nang 기자 | 2020-11-30 22:06
BoA သည် '၂၀ နှစ်ပြည့်အယ်လ်ဘမ် BETTER' ကိုထုတ်ဝေမှု အခမ်းအနားကိုကျင်းပရန် live တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်
ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ဖြန့်ချိမည့် နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အယ်လ်ဘမ်ကို အမှတ်တရအဖြစ်ဖြင့် BoA သည် “BETTER” BoA ကို Naver V LIVE SM TOWN ရုပ်သံလိုင်းမှ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် ည ၉ နာရီတွင် စတင်မည်။ ထိုနေ့တွင် သီချင်းသွင်းတဲ့ချိန် ဖြစ်စဉ်များနှင့် “BETTER”အပါအဝင် အ
K-POP | Khaing 기자 | 2020-11-27 19:27
RBW ကုမ္ပဏီမှ Purple Kiss အဖွဲ့အား ယနေ့ (၂၆) တွင် အကြိုပွဲဦးထွက်လုပ်ခဲ့သည်
Purple Kiss ၏ ပွဲဦးထွက်စီမံကိန်းကို ၂၆ ရက် ညနေ ၆ နာရီတွင် ဂီတဆိုဒ်များမှတဆင့် My Heart SkipaBeat ကြိုတင်ပွဲဦးထွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် single သီချင်းကို “My Heart SkipaBeat” ဖြင့် စတင်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။'My Heart SkipaBeat' သည် သီချင်းစာသားနှင့် compositionတွင် RBW ဌာနခွဲမှ ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည့် Seo Yong
K-POP | MoMo 기자 | 2020-11-26 20:06
Black Pink Jisoo, Harpers Bazaar ဓာတ်ပုံကို ပြသခဲ့သည်
Jisooသည် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ထုတ်ဝေသော'Harpers 'Bazaar' ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းတွင် ချစ်စရာကောင်းသော ဖက်ရှင် သရုပ်ဖော်ပုံကိုပြသခဲ့သည်။ 'အကြာကြီးနေမှ ရတဲ့ အားလပ်ရပ်ကို ဘယ်လိုကုန်ဆုံးရမလဲ?'ဆိုသော conceptဖြင့် ရုပ်ပုံဆွဲခြင်း၊ နံနက်စာစားခြင်းနှင့် ပါတီပွဲကျင်းပခြင်း စသည့် တစ်ယောက်တည်း အချိန်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ကု
K-POP | Nang 기자 | 2020-11-25 19:52
Cheongha, ယနေ့ (၂၅ရက်)တွင် တစ်ကိုယ်တော် သီချင်း 'Dream of You' performance ဗီဒီယို teaser ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Teaser ဗီဒီယို ပထမဆုံးအစကို Cheong-ha ၏ အနီရောင်နေ၀င်ချိန်တွင် ကျောဘက် ရပ်နေသော silhouette ပုံစံကို ပြသခဲ့သည်။ သူ၏အမူအယာကို စတင်ချိန်တွင် ပြောင်းလဲသွားသည့် အခြား မြင်ကွင်းတစ်ခုတွင် Cheong-ha နှင့် dancers တို့သည်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော အက performanceကို ပြသခဲ့သည်။ထို့အပြင် ဓာတ်ပုံတွင
K-POP | Khaing 기자 | 2020-11-25 18:44
NCTသည် သီချင်းသစ် stage 'Music Bank' တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြသမည်ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ (၂၇) ရက်တွင် NCT သည် Music Bank တွင် '90's Love' stageကို ပြသရန်စီစဉ်နေပြီးနောက် ၂၈ ရက်တွင် MBC'Show! Music Core နှင့် SBS ၏ “Inkigayo” သည် “90's s Love” နှင့် “Work It” သီချင်းနှစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်ထားရာ ပရိသတ်များက စိတ်ဝင်စားနေကြသည်။'90's Love'သည် old school R&B hip-hop သီချင်းဖြစ်ပြီး Winw
K-POP | MoMo 기자 | 2020-11-25 01:39
Song Joong-ki သည် '2020 MAMA' တွင် hostအဖြစ် ပါဝင်မည်ဟု အတည်ပြုခဲ့သည် . entertainment လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆာင်သွားမည်
'2020 MAMA (2020 Mnet Asian Music Awards)' ကို ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားပြီး သရုပ်ဆောင် Song Joong-gi သည် hostအဖြစ် ပါဝင်ပြီး global music festivalကို ဦးဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။MAMA သည် ၁၂ နှစ်မြောက် global music Awardsကို CJ ENMမှ တာဝန်ယူကျင်းပသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Mnet သည် “Video Music Awards”
K-POP | Nang 기자 | 2020-11-25 01:26
BLACKPINK ကြီးမားသောပရိုဂျက် Teaser ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
YG Entertainment သည် ၂၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် တရားဝင်ဘလော့တွင် 'BLACKPINK-AROUND THE WORLD' ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Teaserဗွီဒီယိုကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ဆိုးလ်မှစတင်ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ အဓိကမြို့ကြီးများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာမြို့ကြီးများ၏ ဓာတ်ပုံများကို ဂြိုလ်တုမြင်ကွင်းမှ ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် Black Pink ၏ ကိုယ်စာ
K-POP | Nang 기자 | 2020-11-23 20:01
'Treasure' သည် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်တွင် comeback လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
YG Entertainment သည် Treasure ၏ အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံး၏ D-DAY ပိုစတာနှင့် performance ဗီဒီယို5ခုမြောက်ကို6ရက်တွင် တရားဝင်ဘလော့ (www.yg-life.com) တွင် ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ညနေ6နာရီတွင် စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။"'ORANGE'သီချင်းသည် Asahi မှ သီချင်းစာသားကို ရေးသားထားပြီး Treasure ၏ သီချင်းတ
K-POP | MoMo 기자 | 2020-11-10 21:08
Lee Seung-gi၊ အဆိုတော်အဖြစ် ၅ နှစ်ကြာမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်
Lee Seung-gi သည် သူ၏7ကြိမ်မြောက်အယ်လ်ဘမ်ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် တရားဝင်ဖြန့်ချိရန် စီစဉ်ထားပြီး Yoon Jong-shin မှ ရေးသားသော The Obvious Man ကို နိုဝင်ဘာလ 15 ရက်နေ့တွင် ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့် ဇူလိုင်လတွင် SBS TV ၏ 'Master in the house' တွင် ပြသခဲ့သော 'Forbidden Love' သီချင်းသည် YouTube
K-POP | MoMo 기자 | 2020-11-10 21:02
Super Junior ၏ ၁၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် ... "အရမ်း အံသြစရာကောင်းပါတယ်"
"အရမ်း အံသြစရာကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က 15 နှစ်ကြာ တောင့်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။"ဟု"လက်မလျှော့ဘဲ ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့် ဒီလိုနေ့မျိုးရောက်လာပါတယ်။""Super Junior ဆရာတွေလဲ ပင်ပန်းသွားကြပြီ ရှေ့လျှောက်လဲ ပင်ပန်းရဦးမှာပါ၊ မနက်ဖြန်ဆိုရင် နည်းနည်းသက်သာသွားမှာပါလို့ စဥ်းစားခဲ့ရင် အမှားကြီးမှားသွားပါလိမ့်မယ်"လို့
K-POP | Nang 기자 | 2020-11-10 20:57